Reherahan’ny firenena ny handray vahiny manan-kaja ary samy mitodika any amin’io ny sain’ny rehetra ankehitriny. Makotroka ny fiomanana, namboarina ny fotodrafitrasa, nodiovina ny tanàna,… Zary lasa sangisangy aza ny hoe tokony hijanona eto foana izy na mandray vahiny foana isika amin’izay madio sy milamina ny tanàna. Hay azo atao ihany ny manao zavatra tsara, ny manadio … Mila faranana amin’izay ilay politikan’ny haingo ambony tsikoko. Firifiry ny vahiny manan-kaja tonga teto izay reharehan’ny mpitondra ny fahatongavany teto, tahaka ny filoha Rwandais Paul Kagame. Toa tsy haintsika anefa hatreto ny tena maka lesona fa zary lasa fakana doka politika fotsiny no betsaka. Toa tsy haintsika ny misintona lesona amin’ny nataon’ireny olona manana ny maha izy azy eo amin’ny tantaran’izao tontolo izao ireny. Asa na mba hiova ihany ny politikan’ny fampanantenana efa ho lava sy kisehoseho hakana doka na mba hivadika asa azo tsapain-tanana sy hisy fiantraikany amin’ny rehetra !